China Bai He Hua Herbal Tea Lily ကုန်ပစ္စည်းများ ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့် စက်ရုံ |အကောင်းဆုံး
တရုတ်အမည် bai he hua
အဓိကလုပ်ဆောင်မှု- အဆုတ်ကို စိုစွတ်စေခြင်း၊ ချောင်းဆိုးခြင်းကို သက်သာစေခြင်း၊ မီးရှင်းခြင်း၊ နှလုံးကို ငြိမ်သက်စေပြီး စိတ်ကို အေးချမ်းစေခြင်း။
Lilium (သိပ္ပံအမည်- Lilium) သည် Liliaceae ၏ နှစ်ရှည်ပင် အရွက်ကျီးပေါင်းပင် ဖြစ်သည်။အာရှတိုက် အရှေ့ပိုင်း၊ ဥရောပ၊ မြောက်အမေရိက စသည်ဖြင့် မြောက်ဘက်ကမ္ဘာခြမ်းရှိ တိုက်ကြီးတိုင်းလိုလို၏ သမပိုင်းဒေသများတွင် ပေါက်ဖွားကြပြီး ကမ္ဘာပေါ်တွင် အမျိုးပေါင်း 110 ကျော်ရှိပြီး 55 မျိုးမှာ တရုတ်နိုင်ငံတွင် ထုတ်လုပ်ပါသည်။မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်း၊ အာရှနှင်းပန်း၊ မှိုလီလီ၊ ရေမွှေးလီလီ၊ နေကြာပန်း (မီး) လီလီ၊ လီလီ အစရှိသည့် အတုအယောင်မျိုးစပ်မှုဖြင့် ထုတ်လုပ်သော မျိုးကွဲအသစ်များစွာရှိသည်။လီလီသည် ကြော့ရှင်းသော ကိုယ်ဟန်အနေအထား၊ အစိမ်းရောင်အရွက်များ၊ ပင်စည်များနှင့် ထုဆစ်ထားသည့် ရှားပါးပန်းပွင့်သစ်တစ်ပွင့်ဖြစ်သည်။၎င်း၏ သိပ္ပံအမည် (Lilium brownii var. viridulum Baker) ကို qiangshu, fanjiu, Shandan, Daoxian, chongmai, Zhongting, Moluo, chongxiang, zhongfenghua, Baihe ကြက်သွန်ဖြူ၊ Master Fu ကြက်သွန်ဖြူ၊ Suannao အာလူး၊ yehehua စသည်ဖြင့် လူသိများသည်။
အဆုတ်ကို စိုစွတ်စေခြင်း၊ ချောင်းဆိုးခြင်းကို သက်သာစေခြင်း၊ မီးကို သန့်ရှင်းစေခြင်း၊ နှလုံးကို အေးချမ်းစေပြီး စိတ်ကို အေးချမ်းစေပါသည်။
yin ချို့တဲ့ခြင်း၊ သလိပ်ထွက်ခြင်း၊ ရင်တုန်ခြင်း၊ အိပ်မပျော်ခြင်း၊ အိပ်မက်မက်ခြင်းနှင့် အိပ်မပျော်ခြင်းတို့ကြောင့် ချောင်းဆိုးခြင်းအတွက် အသုံးပြုသည်။
1. Lily ဂျုံယာဂု:
ကုန်ကြမ်း- 50g လီလီမှုန့်၊ 60g japonica ဆန်၊ သကြား။
Modulation - အရင်ဆုံး လီလီနဲ့ ဆန်ကို ဆေးကြောသန့်စင်ပြီး အိုးထဲကိုထည့်၊ ရေထည့်ကာ မီးနည်းနည်းနဲ့ ပြုတ်ပါ။Lily နှင့် japonica ဆန်များ မှည့်ပုပ်သွားသောအခါ သင့်လျော်သော သကြားပမာဏကို ထည့်၍ စားသုံးနိုင်ပါသည်။
အထူးသဖြင့် သက်လတ်ပိုင်းနှင့် သက်ကြီးရွယ်အိုများ၊ အားနည်းပြီး အိပ်မပျော်သူများ၊ အဖျားနည်းခြင်းနှင့် စိတ်တိုတတ်သူများအတွက် အထူးသင့်လျော်ပါသည်။
ထို့အပြင်၊ Lily ဂျုံယာဂုထဲသို့ Tremella ပေါင်းထည့်ခြင်းသည် yin အာဟာရနှင့် အဆုတ်ကို စိုစွတ်စေသည်။မတ်ပဲထည့်ခြင်းသည် အပူရှင်းလင်းခြင်းနှင့် အဆိပ်ဖြေခြင်း၏ အကျိုးသက်ရောက်မှုကို တိုးမြင့်စေပါသည်။
Modulation - အညစ်အကြေးများကို ဖယ်ထုတ်ပြီး လီလီပန်းကို ဆေးကြောပါ၊ လီလီကို ကြည်လင်သောရေ၌ ထပ်ခါထပ်ခါ ဆေးကြောပါ၊ အိုးထဲသို့ ရေထည့်ကာ ပုပ်သွားသည်အထိ ထိပ်မှပြုတ်ပါ၊ ထို့နောက် သကြားပမာဏ မှန်ကန်စွာထည့်ပါ။လီလီဟင်းချိုသည် တီဘီရောဂါဝေဒနာရှင်များကို ကုသရန်အတွက် သင့်လျော်သည်။စားသောအခါ အနည်းငယ်ခါးသော်လည်း ဂရုတစိုက် မြည်းကြည့်သောအခါ ခါးသည်နှင့် ချိုသောကြောင့် လူကို အရသာခံစေသည်။ရေခဲသေတ္တာထဲမှာ ခဏလောက် သိမ်းထားရင် အအေးခံတဲ့ သောက်စရာပါ။
လီလီအကိုင်းအခက်ပေါ်ရှိ ပထမဆုံးပန်းဖူးပွင့်ကို အပြည့်အ၀ချဲ့ပြီး ပွင့်လင်းမြင်သာစွာ ခူးဆွတ်နိုင်သည်။စောလွန်းလျှင် ပန်း၏အရောင်ကို ထိခိုက်နိုင်သည်။အချိန်နောက်ကျပါက ထုပ်ပိုးရာတွင် အခက်အခဲဖြစ်စေရုံသာမက ဝတ်မှုန်ထုတ်လွှတ်ခြင်းကြောင့် ပန်းပွင့်များကိုလည်း ညစ်ညမ်းစေပါသည်။
ရေဓာတ်ခန်းခြောက်သွားပြီးနောက်၊ လိုအပ်ပါက ရေနှင့်တိုက်ရိုက်စိမ် သို့မဟုတ် အခြားပါဝင်ပစ္စည်းများနှင့် ရောစပ်နိုင်သည့် ပျောက်ကင်းသွားသော Lily လက်ဖက်ရည်ကို ကျွန်ုပ်တို့ ရရှိနိုင်ပါသည်။
ယခင်- Chuan Niu Xi ရိုးရာတရုတ်ဆေးပစ္စည်း Cyathula အမြစ်
နောက်တစ်ခု: Qing Ning Meng Pi ၏ အသီးအနှံသစ် Kaffir Lime အခွံ
သီးသန့်တံဆိပ် သဘာဝဆေးဖက်ဝင်အပင်များ ပါးပါးလက်ဖက်ခြောက် 14 ရက် d...
လက်ဖက်ရည်ပူပူ ထုတ်လုပ်သူ ဂန္ဓမာ fl...
Tai Ju Oganic ပန်းခြောက် သဘာဝ သန္ဓေသား Chrys...
Ma Yu Lan သည် အရည်အသွေးမြင့် ဆေးဖက်ဝင်အပင်ခြောက် ထုတ်လုပ်သူ...
တရုတ်ထုတ်လုပ်သူခါးသီး kuding ဆေးဖက်ဝင်အပင်များလက်ဖက်ရည်d...
သီးသန့်ထုတ်လုပ်သူ Lab သည် ချိုမြိန်သော အိပ်စက်ခြင်းအလှကို ...